‘तरुण दल भनेको विचारक हो, आजको तरुण दल भोलिको कांग्रेस हो ।’ - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
‘तरुण दल भनेको विचारक हो, आजको तरुण दल भोलिको कांग्रेस हो ।’
तरुण दल दाेलखाका अध्यक्षका उम्मेद्वार कुमार अधिकारी (आरबी) सँगकाे कुराकानी
२०४९ सालमा दुर्गा मावि मागादेउरालीको नेविसंघ इकाई सभापतिको भूमिकाबाट राजनीति सुरु गरेका कुमार अधिकारी २०५८ सालमा नेपाल तरुण दल दोलखाको जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुँदै हाल उपाध्यक्षको भूमिकामा छन् । अधिकारीले तरुण दल मार्फत गाउँगाउँमा विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण, युवाहरुलाई खेलकुदका सामाग्री वितरण, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, भुकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरण लगायतका विभिन्न सामाजिक काममा सक्रिय अधिकारी यही भदौं ५ र ६ गते हुने जिल्ला अधिवेशनमा आफूलाई सशक्त अध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत छ तरुण दलका अध्यक्षका उम्मेद्वार कुमार अधिकारी (आरबी) सँग आवाज अनलाइनले गरेको कुराकानी…
१. अरु बेला चुपचाप हुने कांग्रेस र तिनका भातृ संगठन अधिवेशनको बेलामा मात्र चहलपहल हुन्छ । तरुण तलमा पनि त्यस्तै त होइन ?
हुन त त्यस्तै देखिन्छ । तपाईँले गरेको प्रश्न त केही हदसम्म त साँचो पनि हो । तर ठ्याक्कै त्यस्तो होइन । एउटा जीवित संस्थाको लागि अधिवेशन भनेको महान चाड हो । यो चाडमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता सलबलाउने अथवा चासोे स्वभाविक पनि हो । यो अधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन हुने पनि भएकाले नेतृत्व लिन खोज्नु, सक्षम नेतृत्व खोज्नु स्वभाविक हो । यो चहलपहलको ऊर्जालाई कांग्रेसले गाउँगाउँ तहसम्म पु¥याएर यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । दोलखा कांग्रेसले निकै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी छ । अरु पार्टीले हेर्दा कांग्रेस आन्तरिक चुनावका लागि मात्र लड्छ भन्ने लाग्छ । अब हामीले स्थानीय र संसदीय चुनाव पनि जित्नु छ । त्यसका लागि यो ऊर्जा कांग्रेसले त्यहाँसम्म पु¥याउनुपर्छ ।
२. यस भन्दाअघि निष्कृय तरुण दल अधिवेशनका लागि मात्रै किन यस्तो सक्रियता ?
यो सक्रियता तरुण दलका लागि मात्र होइन, नेविसंघ र कांग्रेसमै पनि हो । निष्कृय हुनुमा यसमा लामो ‘ग्याप’ भएर पनि हो । २÷३ वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने ठाउँमा जयराम श्रेष्ठ १३ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालेर बस्दा कति भार भयो होला ? यो भन्दैमा तरुण दल सुतेर बसेको भन्ने पनि होइन । हाम्रो कामको मार्केटिङ गर्न सकेनौँ होला, जनतालाई भन्न सकेनौँ होला, जति गर्नुपर्ने हो त्यत्ति गर्न सकिएन होला तर धेरै काम गरेका छौँ । गाउँगाउँ पुगेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छौँ । अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने नेतृत्व यो अधिवेशनले चयन गरोस् ।
३. यतिका समस्या हुँदाहुँदै तपाईँले आफूलाई अध्यक्षमा उम्मेद्वारको रुपमा अघि सार्नुभएको छ । किन तपाई नै अध्यक्ष हुनुपर्ने ?
मैले तरुण दलमा काम गरेको १६ वर्ष लाग्यो । ईश्वरनारायण मानन्धरको नेतृत्वमा म सदस्य थिएँ । लामो समय अधिवेशन नभएकाले अहिले म उपाध्यक्ष छु । उपाध्यक्षले अध्यक्षको दाबी गर्नु कुनै नौलो होइन । तरुण दल र कांग्रेसमा बसेरै धेरै काम गरेको छु । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र पनि कांग्रेसको नेतृत्व खाली छ । संगठनको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छ, योजना छ । त्यसैले पनि मैले आफूलाई अध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा घोषणा गरेको छु, त्यसमा सबै तरुण साथीहरुले मूल्याङ्कन गर्नुहुने छ र साथ पनि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
४. अध्यक्षका लागि तपाईँसँगै अरु साथीहरुले पनि उम्मेद्वारको रुपमा घोषणा गर्नुभएको छ तर तपाईँलाई नै तरुणहरुले नेता छान्नुपर्ने कारण के छ ?
सबै साथीहरु नेतृत्व गर्नका लागि आआफ्नो ठाउँ, क्षेत्रमा योग्य हुनुहुन्छ । तर अनुभवको हिसावले, लामो समय काम गरेको हिसावले र योजनाका आधारमा अरु साथीहरुभन्दा म योग्य छु भन्ने लाग्छ । तिघ्रा ठुला हुँदैमा, गोजी ठुलो हुँदैमा तरुण दल हुन्छ भन्ने छैन । तरुण दल भनेको विचारक हो, आजको तरुण दल भोलिको कांग्रेस हो । आजको कांग्रेस भोलिको पार्टी सभापति, सांसद, जनप्रतिनिधि हो । त्यसैले अनुभव र सही व्यवस्थापनका हिसावले अहिले अरु साथीहरुभन्दा म योग्य रहेको मेरो ठहर छ । त्यसैले अहिले नेतृत्वका लागि मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र आउँदा अधिवेशनमा उहाँहरुका लागि ठाउँ खाली गर्नेछु । उहाँहरुले अहिलेदेखि नै अर्को पटकका लागि तयारी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अहिले मेरो उम्मेद्वारी व्यक्तिका लागि होइन संस्थाका लागि हो । तरुण दलको संस्थागत विकासका लागि म काम गर्नेछु ।
५‍. तपाई हाल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिलेको तरुण दल धेरै गतिशील छैन तर यसलाई भावी दिनमा कसरी गतिशील बनाउनुहुन्छ त ?
समस्या नै यहीँ छन् । तर समस्यालाई सही ढंगले हल गर्नु नै हाम्रो कुशलता हो । वीपी कोइरालाले पनि मुक्ति सेनालाई प्रहरीमा रुपान्तरण गरेर बाँकी युवाहरुलाई तरुण दल बनाएर राजनैतिक संस्कार सिकाएर सुरु गरेको संगठन हो यो । यही उद्देश्यलाई अघि बढाउने हो । कांग्रेसले आव्हान गरेको आन्दोलनामा सहभागी हुने, पहिचान गरेका समस्यालाई हल गर्ने र कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनावलाई आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्न तरुण दलले काम गर्ने हो । कांग्रेसले अङ्गिकार गरेको समाजवादलाई साकार पार्ने आन्दोलनमा म आफू पनि सामेल हुन्छु र संगठनलाई पनि त्यसमा सहभागी गराउँछु ।
युवाहरुको रोजगारीको कुरा छ, युवा सशक्तिकरण र जागरणको कुरा छ । म अहिले उपाध्यक्ष छु । यही जिम्मेवारीमा भएर पनि भुकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरण, जाडोमा न्यानो कपडा वितरण, जस्तापाता वितरण, खेलकुदका सामाग्री वितरण लगायतका विभिन्न सेवामूलक कामहरु समेत तरुण दल मार्फत भएकै हुन् । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यस्ता कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउँदै दोलखाली युवाहरुलाई सम्पन्न गराउनका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा सिर्जनशील युवाहरुलाई लगाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि मेरो उम्मेद्वारी हो । संगठन विस्तारका लागि अरुले ५ घण्टा काम गर्छ भने म १० घण्टा काम गर्छु । संगठनको कामको सिलसिलामा कोही तरुणहरुलाई आइपर्ने कुनै पनि समस्याका लागि म सबैभन्दा अग्रपङ्तिमा उभिएर काम गर्नेछु । संगठनको काम चुस्त दुरुस्त हुनेछ ।
६. कांग्रेस र तिनका अन्य भातृ संगठनका गतिविधि सुस्त भएका अवस्थामा तपाईँले भने जस्तो तरुण दललाई कसरी सशक्त बनाउनुहुन्छ ?
अहिलेको कांग्रेसले १० वर्षपछि कस्तो कांग्रेस संगठन बनाउने, अहिलेको तरुण दल र नेविसंघले १० वर्षपछिको पुस्ता कस्तो बनाउने भन्ने योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ । हिजो के थियो भन्दा पनि अब समय सापेक्ष रुपमा सशक्त संगठन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि त्यही अनुसारको नेतृत्व चाहिन्छ । म त्यो नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्माविश्वास छ । १० वर्षपछिको एउटा सशक्त कांग्रेस, सशक्त तरुण दल र जुझारु नेविसंघ बनाउनका लागि म भूमिका निर्वाह गर्छु । हिजो कांग्रेस राणा विरुद्ध लड्यो, संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गथ्र्यो, अहिले गणतन्त्रको कुरा गर्छ । त्यसैले सबै समयअनुसार चल्नुपर्छ । डिजिटल रुपमा संगठन गर्नुपर्छ । दाजुहरुका विचारलाई सम्मान गर्दै उहाँहरुलाई अघि लगाएर पार्टी र सबै संगठनलाई सँगै लिएर मेरो नेतृत्वको तरुण दलले काम गर्नेछ ।